Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ezona ndlela zintle zokuhombisa iinwele eMntla Merika: Dibana nee-stylists
Umbutho woBugcisa boBugcisa (PBA) unemincili ukwazisa abaphumeleleyo kwi-2021 North American Hairstyling Awards (NAHA), elona khuphiswano lubalaseleyo kushishino lobuhle eMntla Melika. I-NAHA iwonga amagcisa aphezulu kushishino lobuhle kunye neetalente zokuyila ezityhala imida yesakhono kunye nobuchule bokuyila. Ngaphezulu kweminyaka engama-30, amawaka amagcisa anetalente asebenzise i-NAHA njengeqonga lokubonisa umsebenzi wabo wokuphumelela i-NAHA enqwenelekayo.
Umsitho obekekileyo ububanjwe ngoMgqibelo, nge-29 ka-Agasti eMandalay Bay Resort kunye neZiko leNgqungquthela ngexesha leCosmoprof North America (CPNA) eLas Vegas., Nevada.
I-NAHA ibhiyozela italente ekhokelela kumzi mveliso kunye neempawu ezili-15 zokugqwesa kubugcisa nakwizinto zobugcisa, kubandakanya ne-Inspiring Salon yoNyaka kunye neebhaso zoTitshala zoNyaka.
“Lo ibingunyaka ongazange ubonwe ngaphambili we-NAHA, kodwa ubuchule obuphakamileyo kunye nobugcisa obumelweyo beziphakathi kwezona zibalulekileyo kwimbali yolu khuphiswano,” kwabelana uNina Daily, uMlawuli weSigqeba se-PBA. Umzi mveliso uhlanganyele ukuhambisa amandla kumandla amatsha kunye nokuzibandakanya, kwaye besingazukuqhayisa ngabaphumeleleyo, abagqibe kumjikelo wokugqibela kunye nawo wonke umntu obeka uthando namandla amakhulu ekwenzeni ukuba ubusuku obunje bube yimpumelelo.
I-NAHA 2021 ibibanjelwe ngu-A-uluhlu lwabantu abadumileyo be-stylist kunye ne-Living Proof Global Creative Director uMichael Shaun Corby kwaye ibonakalise imiboniso yobugcisa nguSilas Tsang kunye neqela le-Ulta Beauty Pro. Umnyhadala wawusasazwa ngqo kwaye wawufumaneka kwimfuno yabo bangakhange bakwazi ukubakho buqu.
Ukongeza kumsitho wamabhaso, i-NAHA 2021 yayiquka ukwamkela ikhaphethi ebomvu yokwamkela abagqwesileyo be-NAHA, abaphumeleleyo be-NAHA bangaphambili, abaphembeleli bezobuhle abakhokelayo, kunye nosaziwayo kulo mboniso, kwaye yabanjwa liQela leMithombo yeendaba. Isalon yanamhlanje kunye no-Anne Morattoalong kunye ne icon yomzi mveliso, utitshala, umchebi wekhwele kunye netshantliziyo uRodrick Samuels.
Abaphumeleleyo be-NAHA 2021:
Ilungelo leGarde- Sharie Valcin
Uhlobo lomhleli woNyaka- UDanielle Keasling
Utitshala woNyaka- iSam Villa
Inwele zeenwele- iSuzanne Sturm
Ukucheba iinwele- uStephen Moody
Umlobi weenwele zoNyaka- uSilas Tsang
I-Salon ekhuthazayo yoNyaka- Isaladi yeMibala yeSpa + Spa
Umenzi wobugcisa woNyaka- iNohemi Capetillo
INtloko yeeNwele zeNwele yoNyaka- uRuth Roche
I-Hairstylist yamadoda yoNyaka- iNieves Almaraz
# NAHAMoment- uLauren Moser
Umlobi wezinwele woMfundi woNyaka- uAlisha Kemp
Isitayile kunye nokuGqibezela- uNick Stenson
Iqela lonyaka- uJulie Vrie